Orinasa mpandahateny Bluetooth - Mpanamboatra Speaker Bluetooth any Shina, mpamatsy
Speaker Bluetooth / Fanatanjahantena an-kalamanjana / BS-OS01
Ny mpandahateny Bluetooth matevina indrindra ho an'ny fanatanjahan-tena any ivelany, kely kely, porofon-drano avo lenta, anti-dropping, anti-vovoka, dia miasa amin'ny faritra 10m savaivony. Amin'ny batterie build-in dia afaka miasa hatramin'ny 6hrs izy io. Izy io koa dia azo ampiasaina amin'ny mpandahateny azo entina, ao amin'ny efitrano fandriana, any amin'ny birao na any amin'ny piknik.
Play Bluetooth, tohano ny endrika MP4 / WMA / WMV mahazatra, feo basona mavesatra tsara. Vahaolana Bluetooth kinova 5.0, mitondra fampitana feo tena marin-toerana. Fitaovana Bluetooth 99% mifanaraka, na takelaka finday marani-tsaina izany, na solosaina finday mahazatra dia mifanaraka avokoa. Miaraka mahafinaritra izany.
Speaker Bluetooth / Fanatanjahantena ivelany / BS-OS02
Ny volavolan-dahatsoratra mpandahateny Bluetooth lamaody ho an'ny fanatanjahantena ety ivelany, TWS 1 + 1 dia nampitomboina avo roa heny ny feon'ny bass mavesatra, miaraka amina batterie dia afaka miasa hatramin'ny 6hrs. Ary miantso maimaimpoana ho an'ny mety aminao amin'ny alàlan'ny dia.
Manohana ny filalaovana Bluetooth sy ny lalao karatra TF, ary ny mozika endrika MP4 / WMA / WMV mahazatra. Miaraka amin'ny kinova Bluetooth 5.0 dia tsy niahiahy momba ny fifanakalozana tena tsara izahay. Ary ny asany manaporofo ny rano, manohitra ny filatsaka, ny vovoka manohitra azy dia manao azy ho fitaovana mozika mahafinaritra ho an'ny fanatanjahan-tena any ivelany. Mazava ho azy fa azonao ampiharina ao an-trano, any amin'ny birao koa, na aiza na aiza ilainao izany.
Speaker Bluetooth / Fanatanjahantena ivelany / BS-OS03
Ity modely Bluetooth mpandahateny lamaody maodely endrika ivelany sy multi-miasa mitambatra ity. Natao ho an'ny fanatanjahantena ivelany, porofon-drano, fanoherana ny vovoka ary fanoherana anti-dropping. Tsy nanana ahiahy momba izany ianao rehefa milalao any ivelany.
Mampifandray mpandahateny 2 miaraka, miara-milalao miaraka izy ireo. Isaky ny velomina ireo mpandahateny Bluetooth tsy misy tariby roa dia hampifandray azy ireo ho azy alohan'ny hifandraisany amin'ireo fitaovana nify manga hafa. Na izany aza, mpandahateny Bluetooth iray ihany koa dia milalao tsara.
Ny mpandahateny Bluetooth miaraka amina mpamily roa sy diaphragm bas, dia milalao treble marihitra, mids feno antsipirihany ary bass be mpanankarena. Na dia amin'ny habetsaky ny be indrindra aza, amin'ny fomba mitovy amin'ny fampisehoana fampisehoana mivantana. Miaraka amin'ny tena feo HD 360 °, ankafizo ny traikefa nahafinaritra entiny anao.
Azo ampiasaina amin'ny filalaovana Bluetooth, lalao karatra TF, lalao U-disk ary lalao AUX, ny Bluetooth 5.0 tech izay mampihena ny fanjifana azy io fa ny fifandraisana haingana sy mafy orina kokoa amin'ny fitaovana, telefaona, solosaina, tablest, fahitalavitra sns ..
Ary raha tsy izany dia manana fiantsoana antso maimaim-poana sy fiasan'ny FM izy, hanompoana anao bebe kokoa. Na ny fehin-kibo mahafinaritra aza dia nahazo fomba 3 ianao. Tena mpandahateny Bluetooth marani-tsaina izy io.
Mamboly Lightin ny zavamaniry, Mamboly hazavana, Jiro zavamaniry, Mitombo ny avotra, Mitombo Lightin, Mitombo Ligh,